[VIDEO] Kurapa Kanzira paCongress muMontpellier: Kuchinja Maitiro - TELES RELAY
HOME » MUTSVENE HURUMBA »[VIDEO] Kuvhiyiwa kwekenza kuMontpellier musangano: kuchinja maitiro
[VIDEO] Kuvhiyiwa kwekenza kuMontpellier musangano: kuchinja maitiro
Purofesa Philippe Rouanet, purezidhendi wehurumende inotaura chiFrench yekuvhiya kwepabonde, inotora kushanduka kwezviito zvinokanganiswa nemupiro wemaitiro matsva.
Ichokwadi chaicho, chokwadi chakawedzerwa, marobhoti matsva, njere dzekugadzirisa zvinokanganisa maitiro ekuvhiya uye kutevedza kwepamuviri yekenza. Chinangwa: kuti zvive zvakanyatsobudirira, uye zvishoma kuderera. Basa iri rakakwana kuwira: vhiki rino, 15 inogona, The Millénaire kliniki muMontpellier yakapa basa rayo rekuwana, Da Vinci X, irobhoti "rinotambanudza ruoko nemeso echirembachire", nokuda kwekuvhiyiwa kwekenza yeprostate.
Professor Philippe Rouanet, chiremba ari MHI Val d'Aurelle, chair reCongress rechiFrench Society of Nzira Oncology, pamwe vechikamu vakaungana 300 18 juqu'à Mugovera May muna Montpellier.
► Ndezvipi zvakanyanya zvekuvhiyiwa kwekenza?
Isu tiri mumakakatanwa asingagumi ekuvhiyiwa kwemuviri, kana kuvhiyiwa kwechirwere. Kana iwe ukavhiyiwa nhengo, iwe unoda zvido zvekuvhiya kwechirwere. Uye zvakasiyana. Mukenza, chirwere chinonyanya kukosha kudarika nhengo. Mumwe haafaniri nekufa kwechirongwa ichi.
► Zviito zvinoshanduka?
Kuvhiyiwa kwekenza kwakachinja zvikuru. Pandakatanga, handina kumbofungidzira kushanda ne robot somuenzaniso ... Kune maitiro maviri makuru: nhasi, maitiro acho anonyanya kufungidzirwa, zvishoma kuderedza, nekuwedzerwazve. Nokuwedzera, nokuda kwechiitiko chimwechete, isu tiri kunyanya kushanda, zvakanyanya kune hupenyu hwehupenyu. Raac (Mupepeti wemashoko: kuvandudzwa kwekuvandudza mushure mekuvhiyiwa) uri mupfungwa dzevanhu vose.
Kwete kare kare, mushure mekuvhiyiwa kwakaoma, takagara pamubhedha kwemazuva gumi. Nezvipatara zvitsva, varwere vanosimudzwa zuva rekupindira, uye urefu hwehutachipatara hwakaderedzwa, nokuti zvishoma patinoramba tiri muchipatara, zviri nani kuti tiende. Zvadaro, kurapwa kwekenza kunowedzera kuwedzera kunzwisiswa kwezvinhu zvinokonzerwa nehupenyu, kuongororwa kwechisimba chechirwere.
► Ndeipi nhasi nzira yemurwere anonzi ane kenza?
Zvakakosha kuti nokukurumidza apo kuongororwa kunoitwa, chiremba chiremba achaona murwere. Nokuwedzera, iye achaita chemotherapy uye radiotherapy asati ashandiswa. Uye kuti chironda chacho chinopindura sei kune mishonga iyi ichagadzirisa nzira yekuvhiya. Ndichataura kanzura mbiri, iyo yezamu uye rectum, iyo iyi protocol inoshandiswa. Izvo zviratidzo zvekufambira mberi kwakaitwa.
► Zvakanyanya kunyanya?
Iwe unoziva mubvunzo wokutanga wakabvunzwa nemurume ane kenza yemakwenzi?
► No ...
Anobvunza kana achange aine matambudziko nehupombwe hwake. Apo ndakatanga kuvhiyiwa, zvakanzi kuti chirwere chekenza yemukironi inoshanda zvakanaka inofanira kunge isina simba. Nhasi, zvinopesana, uye ndiwo mugumisiro wekubuda kwemabasa matsva.
► Chii chichagadziriswa kwemazuva mangwana?
Muganhu pakati pezviremba uye vanachiremba unopera. Uye mune imwe nzvimbo, pane inofanira kuva, kunze kwevashandi vezvechiremba, radiologists uye injinjini, vanamukoti chaivo.
Kudzokorora kudzidza kunotsvaga
Ndeipi nzira inonyanya kushandiswa yekushandisa kenza yemakwenzi? The ICM-Val Aurelle Montpellier mutyairi ane multicenter kudzidza munyika gumi European, Reset, iyo inopa vanovhiya yokusarudza magadzirirwo vanosarudza, futuristic (robhoti) kuti mamwe kwakajairika.
Nekuchengetedzwa kwezvirwere: varwere vanofanira kuve "vakaoma", uye chiremba anofanira kunge ane ruzivo rwekugadzirisa kwaanosarudza, pamwe nehutano hwe 30 kune chikwereti chake.
Inorongwa kuisa 1 300 varwere kwemakore maviri. KuProfesa Rouanet, iyi "kuongorora" kudzidza kuchapa zviratidzo zvinokosha zve "kufambira mberi".
► Mangwana, vanachiremba vose vanozoshanda ne robot?
Hongu, nokuti tinoda kuita zvinyorwa zviduku uye zviduku, zvakanyanya. Irobhoti remangwanani ichinyorwa che "octopus" ine kadhi kamera. Yatove iripo, iyo itsva yeDa Vinci, inowanikwa mumatombo eHong Kong, Singapore, muUnited States, uko inoshandiswa muET, gynecological uye digestive kancer. MuEurope, haina mvumo. Asi robotics ndiyo imwe chete yeramangwana rekuvhiyiwa kwekenza.
► Chii chiri mberi?
Inyanzvi iyi iri kuputika. Kuvhiyiwa kwemazuva anotevera kunobva pane chokwadi chakawedzerwa, uye pane njere yekuziva. Kwenguva yakareba, takavimba nezvakaitika zvechiremba, chiyeuchidzo chakaoma kutumira. Mangwana, iyi "chiyeuchidzo" ichasimbiswa nenhoroondo ye data iyo inopinda mukombiyuta, uye kunyanya dheta tinezvo, zviri nani isu tichava.
Mangwana, zvakare, zvichava ishande kuwedzera kuburikidza dzinongoitika orifices ndiyo Kuvhiya endoscopic unozivikanwa kwayo Acronym, "Notes" (Natural orifice translumenal endoscopic kuvhiyiwa). Izvo zvinokonzerwa nemari ndeyekuti, nokuti zvose izvi zvishandiseji, zvose izvi zvinodhura zvinodhura, asi mari yezviitiko haifambi. Ndizvo zvaunoshanda ne robot, izvo zvinoita kuti 2 M €, kana kuti ne reverdin needle ... Unofanirwa kuratidza kuti robot iri nani. Dambudziko nderokuti kutarisira kuri kuenda zvishoma nezvishoma.
Mapiyona: 1 000e Chip
Mingle chemotherapy uye kuvhiyiwa ndiwo mutemo we "Chip", wakauya kuI ICM Val d'Aurelle mu1995, inotungamirirwa neboka raDr. François Quénet. The ICM aiva mumwe wokutanga kuidza Nzira kuFrance kubata metastatic colorectal kenza pamwe kubatanidzwa iri peritoneum, ari "hamvuropu" zviri nhengo mudumbu.
Visible metastases vanobviswa nekuvhiyiwa, uye chemotherapy bath kushungurudza zvisingaoneki matumbo.
Mugumisiro: 40% kupona muZ5 makore, uye 15% kurapa. Nechirwere chemhemotherapy, hupenyu hwemhepo ndeyemwedzi ye16. Nzira iyi inoshandiswawo mukenza yehuvha uye mudumbu.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.midilibre.fr/2019/05/17/la-chirurgie-du-cancer-en-congres-a-montpellier-des-pratiques-en-pleine-mutation,8205660.php
Kenza yemaperembudzi: kwete nevhumi zvakare ...
Kunze kwechirwere chekrarenda chekuongorora kuongorora muCorsica